के हो फोक्सोको रोग ‘पल्मोनरी फाइब्रोसिस’, के कारणले हुन्छ? – Health Post Nepal
के हो फोक्सोको रोग ‘पल्मोनरी फाइब्रोसिस’, के कारणले हुन्छ?
२०७९ वैशाख ३ गते ८:५०
पल्मोनरी फाइब्रोसिस फोक्सोसँग सम्बन्धित एक स्थिति हो, जसमा फोक्सोको तन्तु केही मोटो र कडा हुन्छ। यस्तो भयो भने फोक्सोमा उचित मात्रामा रगत र अक्सिजन प्राप्त हुँदैन र श्वास लिन समस्या आउन थाल्छ। कम अक्सिजनका कारण फोक्सोमात्र नभई बाँकी मुख्य अंग पनि प्रभावित हुने खतरा हुन्छ। यसैले यो स्थिति सकेसम्म चाँडो ठीक गर्नु जरुरी हुन्छ। कैयौंपटक यो स्थितिको समयमै पहिचान हुँदैन र उपचारमा भएको ढिलाइले मृत्युको मुखमा समेत पुर्‍याउँछ।
के हो पल्मोनरी फाइब्रोसिस?
यो एक मेडिकल स्थिति हो, जसमा फोक्सो प्रभावित हुन्छ। फोक्सोको तन्तु खराब हुँदा यस्तो हुन्छ। यो स्थितिमा फोक्सोले उपयुक्त ढंगले काम गर्न सक्दैन। श्वास लिन कठिनाइ हुन्छ। सही कारण पत्ता लाग्यो भने त्यो स्थितिलाई पल्मोनरी फाइब्रोसिस भनिन्छ। कारण पत्ता नलागेको अवस्थालाई इडियोप्याथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भनिन्छ।
थकान या कमजोरी महसुस हुनु
विना कारण तौल कम हुनु
हात या खुट्टाका औंला काम्नु
वातावरणसँग सम्बन्धितः जब फोक्सोले अधिक समयसम्म प्रदुषित वातावरणमा (सिलिकाका कण, फलामका कण, कोइलाका कारण, पशुपंक्षीका मल) श्वास लिन्छ भने फोक्सोको तन्तुलाई हानी पुग्छ।
विकिरण उपचारः यदि उपचारका क्रममा विकिरण या केमोथेरापीको प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि फोक्सो प्रभावित भइरहेको हुन्छ।
केही औषधि सेवनका कारणः केही औषधि जस्तै केमोथेरापी, एन्टिबायोटिक्स, एन्टिइन्फ्लामेटेरी औषधि या मुटुजन्य रोगका औषधि सेवन गर्दा फोक्सोलाई हानी पुग्छ र पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुने खतरा रहन्छ।
अन्य केही मेडिकल स्थितिः यस्तै, केही शारीरिक परिस्थितिका कारण यो रोग हुनसक्छ। जस्तोः स्क्लेरोडर्मा, न्युमोनिया, आर्थराइटिस आदि।
तीनदेखि ४ बुँदा लेभेण्डर आयलमा थोरै पानी मिसाएर एक डिफ्युजरमा राख्नुस्। त्यसलाई दिनमा एक या दुई पटक सुँघ्नुस्। यसमा एन्टिइन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ, जसले फोक्सोको तन्तुको सुन्निने क्रमलाई कम गर्न सहयोग गर्छ।
४५ देखि ८० एमसीजीको भिटामिन डीको मात्रा दैनिक सेवन गर्नुपर्छ। यसबाहेक खानामा भिटामिन डी सामेल गरेर यो मात्रालाई बढाउन सकिन्छ। आफ्नो डाइटमा दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, चिज, च्याउ समावेश गर्न सकिन्छ।
एक गिलास पानीमा सानो चम्चा बेकिङ सोडा मिसाएर पिउनुस्। बेकिङ सोडाको अल्कालाइन प्रकृतिले पौष्टिक तत्व सोस्न सहयोग गर्छ र विषाक्त पदार्थलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। यसबाट एसीडीटी पनि कम हुन्छ र पाचनमा पनि सहयोग गर्छ।